Ao Amin’ny Media, Triatra Avy Ao Anatiny Ny Ankolafy ‘Mpomba an’i Beijing’ Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 1:52 GMT
Dikasarin'ny pejy voalohan'ny Sing Pao Daily, ny 13 Septambra
Any Hong Kong, na ianao any amin'ny ankolafin'ny mpomba an'i Beijing ary manohana ny governemanta foibe any Shina, na ianao avy amin'ny ankolafy mpomba ny demokrasia ary manohana ny fanalefahana ny fanarahamason'i Shina. Fa tato anatin'ny telo herinandro, manakorontana ny laharana ny iray amin'ireo gazety an-tsoratra antitra indrindra ao Hong Kong.
Sing Pao Daily, izay fantatra ho mpomba an'i Beijing, mandefa tsikeranà olona tsy mitonona anarana mikasika ny mpitondra faratampony ao an-tanàna, Leung Chun Ying — izay tonga teo amin'ny fahefana niaraka tamin'ny tsodranon'i Beijing – ary ny Biraon'ny Fifandraisana matanjaky ny Governemantam-Bahoaka Foibe, izay sampana mpisolo tena ambony indrindran'i Beijing any Hong Kong.
Eritrereritin’ireo mpitsikera sasany ho maneho fitriarana avy ao anatin'ny ankolafy mpomba an'i Beijing any Hong Kong io fihetsika mahatohina nataon'ny Sing Pao Daily io, ary maneho ireo fomba fijery avy amin'ny sampana matanjaka avy ao anatin'ny ankolafy mpomba an'i Beijing izay nahilikiliky ny Filoha Mpanatanteraka sy ny Biraon'ny Fifandraisana.
Amin'ny lafiny iray manokana, nampangain'ilay taratasy an-gazety i Leung hoe “nihantsy” ny fahaleovantenan'i Hong Kong no sady misolelaka amin'ireo mpikambana aminà fikambanan-jiolahy na ny Triad. Niampanga ny Biraon'ny Fifandraisana ho miditriditra amin'ireo raharaha anatin'i Hong Kong sy mampiasa ireo fifidianana solombavam-bahoaka eo an-toerana amin'ny fanohanana vondrona izay mampizara ny ankolafy mpomba ny demokrasia ihany koa ilay mpaneho hevitra tsy nitonona anarana.
Ny 12 Septambra, lasa lavitra tokoa ny fanehoankevitra iray tao anatin'ilay taratasy, ka nilaza fa i Leung dia mpikambana amin'ny “Gang of Four” (Tariky ny Efatra) , izay miezaka ny hanozongozona an'i Hong Kong. Teny entina ilazàna ireo manampahefana efatra ao amin'ny Antoko Kaominista Shinoa ny hoe Gang of Four, izay lasa natanjaka tokoa nandritra ny ampahany faramparany tamin'ny Revôlisiôna Koltoralin'i Mao (1966–76) ary avy eo nampangaina ho mpamadika.
Ny ampitson'iny, navoakan'ny Sing Pao ny sarin'i Leung, namboarin'ny mpisera amin'ny Aterineto, sariny izay mipetraka ao amin'ny efitry ny fonja (jereo ny sary ery an-tampony), ary tena niparitka be; io sary io izay nampiarahiny tamin'ny fanehoankevitra mamely an'i Jiang Zai Zhong, Filoha Tale Jeneralin'ny vondron'ny media, Ta Kung Pao, ho namadika ny gazetiny an-tsoratra ho lasa mpanenjika an'i Leung sy ny mpitondra tenin'ny Biraon'ny Fifandraisana.
Nandà ireo fiampangan'ilay gazety an-tsoratra i Leung osady niteny tsotra hoe “tsy dia ilaina ny maneho hevitra amin'izany – fantatrareo tsara ny zava-mitranga.”
Kanefa tsy misy olona tena mahafantatra tokoa ny tena zava-mitranga.
Mieritreritra ireo mpamakafaka sasany fa natao ‘hidarohana’ an-katezerana an'i Beijing ilay fitsikerana tsy mitonona anarana tsy mitsahatra, ary tsy hijanona mihitsy raha tsy faranan'i Beijing mazava ny lisitr'ireo kandidà natao hanoloana an'i Leung amin'ny fifidianana Lehiben'ny Mpanatanteraka amin'ny 2017. Ny taona 2012, nofidian'ny kaomitim-pifidianana misy mpikambana miisa 1.200 ho Lehiben'ny Mpanatanteraka i Leung — ary nahazo ny tso-dranon'i Beijing.
Ireo sasany hafa mino hoe tian'ilay gazety an-tsoratra haverina ao anatiny ny fanadihadiana izay efa mandeha mikasika ny kolikoly ao amin'ilay Biraon'ny Fifandraisana mba hahitàna vokatra. Hatramin'ny Janoary 2016, adihadian'ny tarika iray ao amin'ny Kaomisiona Foibe momba ny Fanarahamaso ny Fifampifehezana (CCDI) avy any Shina ny Biraon'ny Fifandraisana, mijery ny bokim-bolany ary mamerina mijery ny fahaizamanao sy ny fomba fiasan'ireo sampan'i Beijing any Hong Kong.
Ilay Gazety an-tsoratra
Taoriana kelin'ny namoahana ny fanehoankevitra voalohany, namaly bontana ireo gazety an-tsoratra hafa any Hong Kong, isan'izany ny Wen Wei Po izay tantanan'ny Biraon'ny Fifandraisana, ary nanandrana ny hamotika ny Sing Pao, tamin'ny fanenjehana ny tompony. Namoaka tati-baovao izy ireo, tatitra izay miampanga ny tale jeneraliny, Gu Zhuheng, ho “mpitsoaka fitsaràna” izay voarohirohy taminà sehatra fampindramam-bola tsy ara-dalàna ary karohan'ny polisy ao amin'ny tanàna Shinoa, Shenzhen. Nitorioka ilay fiampangàna i Gu, nilaza fa “tsy marina” sy “fanendrikendrehana” izany.
Naka ny Sing Pao Daily i Gu Zhuoheng, gazety izay iray tamin'ireo gazety an-tsoratra antitra indrindra ao Hong Kong, tamin'ny fanatontonany renivola tao amin'ilay kaompania, raha efa teo ambavahaonan'ny banky rompitra ilay gazety ny Aogositra 2015. Tamin'izany fotoana, nieritreritra ireo vahoaka ao Hong Kong hoe notohanan'ny governemantan'i Beijing i Gu tamin'ny fakàna ilay gazety, mba hanamafisan'ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP) ny fanarahamaso amin'ny media any Hong Kong. Efa mitantana gazety an-tsoratra telo any Hong Kong amin'izao ny Biraon'ny Fifandraisana ary saiky mamoaka vaovao mifandraika amin'ny ankolafy mpomba ny Beijing daholo ny ankamaroan'ireo trano lehibe an'ny media.
Mihantsy ny fahaleovantena
Nahatonga hatezerana tamin'ny fitazonana an'i Leung ho tomponandraikitra amin'ny fitomboan'ny hetsika fitakiana fahaleovantena any Hong Kong ilay fanehoankevitra teo amin'ny pejy voalohany, navoaka ny 30 Aogositra. Ito ny dikanteny malalaka natolotry ny Hong Kong Free Press :
Ny tena marina, tsy manana lalam-barotra any Hong Kong ny fahaleovantenan'i Hong Kong… Nandrisika mivantana ny fahaleovantenan'i Hong Kong i Leung Chun-ying, mba hanamafisana ny fahefàn'ny governemantany sy ny andanin'ny voromahery.
Avy eo ilay gazety nanainga ny Kaomisôna Foibe momba ny Fanarahamaso ny Fifampifehezana (CCDI) mba hanao fanadihadiana an'i Leung sy ny Biraon'ny Fifandraisana amin'ny resaka fanaparam-pahefàna.
Andrandrain'ny fiarahamonina ao Hong Kong hoe hanaovan'ny CCDI fanadihadiana ny asa sy ny andraikitry ny Biraon'ny Fifandraisana, ary hampiarahana aminà fepetra hanafoanana ilay vondrona manohintohina ireo tombotsoan'ny firenena sy Hong Kong.
Raha ny marina dia mampiako ny fomba fijerin'ny vahoaka maro any Hong Kong ny hevitr'i Sing Pao, izay nametraka takelaka nanadrohadro hoe Leung ho rain'ny hetsika mpomba ny fahaleovantenan'i Hong Kong, satria izy manao kabary imasom-bahoaka momba ny fironanan'ny mpisintaka “tsy misy” akory.
Zarazarao sy baboy
Araka ny filamatra voasoratra ny taona 1997 hoe “firenena tokana, rafitra roa”, fony naverin'i Royaume-Uni tamin'ny vahoakan'i Shina i Hong Kong, tsy tokony hiova ny rafitra kapitalista sy ny fomba fiainan'ny tanàna ao anatin'ny 50 taona mandrapahatongan'ny taona 2047. Fa tato anatin'ireo taona vitsivitsy, nampiseho marika-nà tsy faharetana , miditriditra lalindalina hatrany amin'ny raharaha anatin'i Hong Kong i Beijing, tafiditra amin'izany ny fanalàna an-daharana amin'ny fifidianana ireo kandidà mpomba ny fahaleovantena, ary ny fanaovana tetikady hizarazaràna ireo vaton'ny mpomba ny demokrasia sy fandemena ny ankolafin'izy ireo, izay tsy toy ny ankolafy mpomba an'i Beijing, tsy dia mizaka firy ny fanarahamaso avy any amin'ny foibe any Shina.”
Namoaka fanehoankevitra iray hafa indray koa i Sing Pao, roa andro talohan'ny 2 Septambra fanombohan'ny latsabato tamin'ny fifidianana teo an-toerana. Nitsikera an'i Leung sy ny Biraon'ny Fifandraisana ilay lahatsoratra, tamin'ny fanomezany loharanon-karena sy fanampiana ho an'ny vondrona ara-politika iray mpomba ny demokrasia, antsoina hoe Youngspiration. Miady amin'ny resaka Fianarana ilay vondrona, vondrona mpianatra mpikatroka mafana fo tao ambadik'ireo andianà hetsika mpomba ny demokrasia ny taona 2014, fantatra amin'ny hoe Revolisiônan'ny Elo. Nanao fiampangàna ihany koa ilay gazety hoe ireo mpikambana fototra sasantsasany amin'ilay vondrona dia avy amin'ny fikambanana iray tsy manao fitadiavam-bola, izay miaraka amin'i Lau Nai Keung, mpandraharaha mpomba an'i Beijing sy mpikambana amin'ny Kaomity Nasionalin'ny Kaoferansy Fakan-kevitra ara-politikan'ny Vahoaka Shinoa. Fa nandà ny fisian'ny rohy amin'i Lau anefa ny Youngspiration.
Avy eo nanontanian'ilay mpaneho hevitra tsy nitonona anarana an'i Leung ny antony nibahanany ireo kandidà enina mpomba ny fahaleovantena nifanandrina tamin'ireo fifidianana solombavam-bahoaka, kanefa nanome alalana ireo mpikambana amin'ny Youngspiration handray anjara amin'ny fifaninanana, indrindra fa fantatra hoe nilaza nivantana ilay vondrona fa hanohana ny fanapahankevitra manokan'i Hong Kong.
Tsy io no fotoana voalohany tamin'ireo fifidianana teo an-toerana tao Hong Kong nahitàna fiakarana tampok'ireo vondrona ara-politika “hiringiriny” ao anatin'ireo mpomba ny demokraty. Ohatra, nandritra ny fifidianana filankevitry ny distrika tamin'ny 2015, nomen'i Anthony Cheng, izay nifandray taminà mpandraharaha mpomba an'i Beijing, famatsiambola ho amin'ny fifidianana ireo vondrona politika vaovao, izay manana ny hery ilaina hifaninanana amin'ireo antoko hafa mpomba ny demokrasia.
Misolelaka amin'ny Triade
Nanohy namely an'i Leung sy ny Biraon'ny Fifandraisana ny Sing Pao taorian'ireo fifidianana solombavam-bahoaka. Taorian'ny nahazoan'ny solombavam-bahoaka vao voafidy, Eddie Chu, fandrahonana ho faty, nampangain'i Sing Pao i Leung hoe nikaroka fatratra fanohanan'ny Triade na ny fikambanan-jiolahy fony izy nanomboka ny fampielezankeviny tamin'ny fifidianana ny taona 2012.
Nampahatsiahivin'ilaygazety ny vahoaka ilay fiaraha-misakafo tamin'ny Febroary 2012, niarahan'i Leung sy ny ekipany nipetraka tamin'ireo solontena am-polony avy amin'ny vondrom-piarahamonina teratany avy any ambanivohitra, ny roa amin'izy ireo ninoana ho miaraka amin'ny Triade. Fampielezankevitr'i Leung ho amin'ny fifidianana ilay fivoriana fiaraha-misakafo.
Tsy niala tamin'ny Triade i Leung taorian'ny nandraisany ny asany, izay nolazain'ireo mpamakafaka ho fanaovana tsinontsinona ny fahambonian'ny lalàna ao Hong Kong. Taorian'ny nahalasa Filoha Mpanatanteraka an'i Leung, ny Aogositra 2013, nantsoina hanakana ireo hetsika manohitra ny governemanta ireo mpikambana amin'ny Triade, tsy hanatona ny fivoriana tao amin'ny trano malalaky ny lapan'ny tanàna, izay natrehan'i Leung. Nandritra ireo hetsika mpomba ny demokrasia ny taona 2014, nampiasaina ireo mpikamban'ny Triade mba hanafika ireo hetsika fitorevahana tany Mong Kok.
9 ora izayVietnam
1 herinandro izaySingapaoro